Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: ‪#‎OromoProtests‬ "Gurra Mootummaan Gabroomiffataan Kun Ummataan Dhaggeeffachuu Didetti,Ummanni Hundi Bakka Jiruu Sagalee Tokkoon Mana Manaa Gad Ba'uun,Akeeka Walootiin,Sagalee Ol Kaasuun Hanga Gurri Isaanii Dhaga'uu Dide Kun Dhaga'u Bira Darbee Duuduutti/Guutummaan Dhaga'uu Dhiisuutti Dhaga'i Ni Dhageettaa Jedhanii Itti Iyyuudha Furmaanni Maayyi."
‪#‎OromoProtests‬ "Gurra Mootummaan Gabroomiffataan Kun Ummataan Dhaggeeffachuu Didetti,Ummanni Hundi Bakka Jiruu Sagalee Tokkoon Mana Manaa Gad Ba'uun,Akeeka Walootiin,Sagalee Ol Kaasuun Hanga Gurri Isaanii Dhaga'uu Dide Kun Dhaga'u Bira Darbee Duuduutti/Guutummaan Dhaga'uu Dhiisuutti Dhaga'i Ni Dhageettaa Jedhanii Itti Iyyuudha Furmaanni Maayyi."
Biyya xoophiyaa jedhamtu tana keessatti ummanni daangaa hanga daangaatti sirna bulchiinsa mootummaa kanaa hadheeffatee jibbe, ummanni sirna kanaan buluu tuffatee rasaasa isaan guyyaa guyyaan itti roobsan fuuldura dhaabbataa jiruuf dhaabbataa ture ummata keenya ummata oromoo qofa. Gaafiin ummata keenyaas amma amma sadarkaa kana sana sirreessa isaaniin jechaa ooluu bira guutummaan darbeera. Gaafii sirna kana hundeen buqqisuu bira eega ga'ee bubbuuleera. Kun ammoo mormii mootumma kana irratti guutummaa naannoo oromiyaatti hoggayyuu taasifamu kanneen naannoolee birootti darbee darbees ta'u taasifamuun garaa garummaa guddaa akka qabu ifaadha. Mootummaan kunis mormii sirna isaanii kana guutummaan buqqisuuf taasifamuuf mormii waan isaan sirreessuu qaban isaanitti himuuf godhamu ija tokkoon hin ilaalu. Kanuma irraa ka'uunis tarkaanfii mormiilee isaan irratti taasifaman irratti fudhatanis dugdaaf garaadha. Heedduu gar gari. Kanaaf jecha hiriirota karaa naga'aan guutummaa naannoo oromiyaatti taasifaman irratti rasaasa roobsan. Kaan isaanii madeessan. Kaan isaanii ammoo ajjeesan. Mormiilee naannoo biraa itti hin bu'an. Kunis gaafiin mormilee naannolee biroottis ta'an sadarkaan gaafiilee isaanii akka ol hin guddanneef akkasuma dhiphinna yeroo ammaa mormiin guutuu oromiyaatii isaan irratti godhamaa jiruun wal qabatee isaan mudateeru akka isaanitti hin babaldhanneef natti fakkaata. Sodaatanii dhiisan akka hin jenne mootummaan kunis ta'ee mootummooleen dhufaa darbaan habashootaa ummatinni isaan sodaa irraa qaban ummata keenya ummata oromoof ummata oromoo irraa qofa ta'uun isaanii beekkamaadha. Mormiin oromiyaa keessatti ta'u teessoo caccabduu rasaasaan tikfannu sanuu nu jalatti guutummaan caccabsa jedhanii sodaatu. Kanaaf maqaadhuma hiriira naga'aa jedhu gurrumaanuu dhaga'uu hin barbaadan. Hiriiratu iddoo tokko jiraa dhageenyaan rasaasa butatu. Rasaasaan ummata harka qullaa sirna isaanii mormuu ba'e fuula dura dhaabbatu. Hanga barbaadan dhukaasuun ajjeesu. Kaawwan madeessu. Ummanni kaayyoo qabsaa'uuf beeku kumootaan madaa'us,dhibbootaaf achii oliinis ajjeefamuus qabsoo hin dhiisu. Gabroomsaanis hanga baduutti ummata miidhuu hin dhiisu. Kunoo barana oromiyaa guutuu keessattis kan ta'aa jirus kanuma. Kan miilanaa garuu adduma. Rasaasinni isaanii nuuf ga'e hanga jettuutti yoo fedhan dhukaasuu itti fufuu danda'u. Kanaaf furmaanni maayyii "Gurra mootummaan gabroomiffataan kun ummataan dhaggeeffachuu didetti,ummanni hundi bakka jiruu sagalee tokkoon mana manaa gad ba'uun,akeeka walootiin,sagalee ol kaasuun hanga gurri isaanii dhaga'uu dide sun dhaga'u bira darbee duuduutti/guutummaan dhaga'uu dhiisuutti dhaga'i ni dhageettaa jedhanii itti iyyuudha."
Posted by Hasan Ismail at 8:38 AM